GRC Hollowed-avy vokatry-GRC Hollowed-avy vokatry-Nanjing BeiLiDa Vaovao ny Fitaovana ny Rafi-Injeniera Co., Ltd.
GRC faran'izay farany
Birao voajanahary GRG
GRC Flame-retina panel résin
Tontonana vita amin'ny valopy
Momba an'i Beilida
Cases amin'ny tetikasa China
Kasety tetikasa any ivelany
Hajao ireo mari-pahaizana
Ny fiaraha-miasa stratejika
GRC Hollowed out out
Eto ianao : Home>Product>GRC faran'izay farany>GRC Hollowed out out
Toerana niaviany: Nanjing, Jiangsu, Sina
Model Number: GRC hollow
GRC (Glass Fiber Re Informed Concrete) dia antsoina koa hoe GRC. Ny anarany sinoa dia vera vita amin'ny vera fanamafisana. Izy io dia singa fitambaran-trano mampiasa sima-simenitra ho fitaovana fototra ary fibreana-miorim-paka amin'ny alàlan'ny alàlan'ny fanamafisana. Mandritra izany fotoana izany, izy io dia ahitana fampidirina isan-karazany amin'ny fampivoarana fampisehoana, pigments, sns. Ny fomba famokarana GRC dia miavaka. Ny manda vita amin'ny fibre voaomana dia atsofoka amin'ny môdely izay vita amin'ny lamba tsara, izay ahafahana miantoka ny vokatra hahavita ny fahamaotinana, ny tanjaka ary ny hery fanoherana. Ny kalitaon'ny vokatra vokarina dia tsy mitovy amin'ny hafaingan'ny fandehanana mivaingana mahazatra. Any Eropa sy Amerika, fonosana GFRC tokana mitongilana be dia be no ampiasaina ho toy ny birao fananganana rindrina ivelany.
Performance Fomba fanondroana
Hatanjaka / MPavy farany Sanda salan'isa 7
Sakan-trano kely indrindra 6.2
Hatanjaka / MPaona farany farany Sanda salan'isa 18
Sakan-trano kely indrindra 15
Herin'ny fiantraikany / kJ / M2 8
Ny habetsaky ny tahiry (maina) / g / cm3 1.8
Ny fanoherana mampihena Taorian'ny fihodinan'ny tsio-kafatra 25, tsy nisy ny delestazy, ny spalling ary ny tranga hafa manimba.
1. plastika avo. Ampiasao tanteraka ny teknolojia haingam-pandrefesana maoderina telo, mba hahafahan'ilay vokatra mametraka tsara ny modely, ary amin'izany fotoana izany dia afaka maneho ny vokatry ny haingon-trano sy ny endrika mampiavaka ny loko, ny modely na ny takelaka.
2. Tena tsara ny fiarovana fiarovana. Amin'ny alàlan'ny fampiharana rafitra feno fiarovana, ny fiasa manohitra ny fanatanjahan-tena sy ny fanadiovana ny otrik'aretina dia azo antoka raha azo antoka ny fiasan'ny rano ao amin'ny vokatra, ary ny fihenan'ny halavan'ny endrika haingon-trano endrika dia mihatsara.
3. Faharetana tsara. Ny fibre PVA avo lenta dia ampiasaina ho fitaovana fanamafisana fanampiny ho an'ny rafitry ny rafitry GRC, ary manampy ny fanatsarana ny fihenan'ny mikrokotrana ny takelaka manondraka, ka manatsara ny faharetan'ny vokatra sy ny fananganana ny serivisy ny serivisy.
4. rindrina maivana sy manify. Ny fahatongavan-javatra dia afaka mahatsapa ny mampiavaka ireo takelaka lehibe sy ny rindrina manify, mampihena be ny fitambaran'ny trano, ahafahan'ny vokatra ampiharina amin'ireo rindrina ivelany misy trano avo, izay ahafahan'ny endri-pananganana haingam-pandeha sy manana endrika endrika malaza.
5. Ny fikajiana ny angovo sy ny fampihenana ny famoahana angovo: raha ampitahaina amin'ny firafitry ny rindrina hafa, ny GRC dia mandany angovo kely kokoa amin'ny famoronana sy fametrahana. Ny manam-pahaizana japoney dia nanao fampitahàna ny fivoahana karbônina teo anelanelan'ny rindrina GRC sy ny rindrina mivaingana nohamafisina, ary ny fampiasan'ny rindrina GRC dia mety hampihena ny famoahana karbona amin'ny 30%.
Vokatra GRC Roughen
Tontonana mifangaro amin'ny Prefabricated